TrueCaller App ကိုအကြံပေးချက်များ | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download | အင်ဖိုအတွက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » tutorials » TrueCaller App ကိုအကြံပေးချက်များ
, TrueCaller app ကိုအပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ
သင်တို့၏သက်သာအောက်တွင်စစ်မှန်သောခေါ်ဆိုသူ၏ app ကိုလှည့်ကွက်များအတွက်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း:
Caller ID ကို
အမည်မသိနံပါတ်များ, spam များကိုသို့မဟုတ်တက်ကောက်နေမတိုင်မီတောင်းဆိုကုမ္ပဏီများသည် identify! ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာတစ်ဦးချင်းစီအဝင်ခေါ်ဆိုမှုများစစ်မှန်တဲ့ဝိသေသလက္ခဏာကိုကြည့်ပါ - ကြိုးဖုန်း, မိုဘိုင်းသို့မဟုတ် Pre-paid!
block နံပါတ်များနှင့် Auto-ပိတ်ပင်တားဆီးမှု telemarketers နှင့် robocalls ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်းဒီတော့လူတိုင်းကအမြဲမလိုချင်တဲ့ဖုန်းခေါ်ဆန့်ကျင်ကာကွယ်ထားသည်အစစ်အမှန်အချိန်အတွက်နံပါတ်များကိုကတင်ပြထားပါတယ်။
အမြဲတမ်းလက်ျာကလူကိုခေါ်! , သင့်မိတ်ဆွေများကို Dial မိသားစုနှင့်သင် dial အဖြစ်အမည်မသိဂဏန်းများ၏အမည်များကိုဖေါ်ထုတ်!
flash ကိုမက်ဆေ့ခ်ျပို့ (ဝေစုတည်နေရာ, status ကို & ရုပ်ပြောင်)
Backup ကိုခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်း, အဆက်အသွယ်, မက်ဆေ့ခ်ျ & google drive ကိုမှ setting
chat, SMS နဲ့ခေါ်ဆိုမှုများ
အခြားအက်ပ်သို့ပြောင်းရန်မလိုအပ်။ Truecaller သင်တို့ရှိသမျှကိုသင်၏ဆက်သွယ်ရေးစီမံခန့်ခွဲကူညီပေးသည်။
ဖှဲ့စညျးနှင့် spam များကို-အခမဲ့ Inbox ထဲမှာ
မလိုချင်တဲ့ကို SMS ကနေသန့်ရှင်းတဲ့သင့်ရဲ့ inbox ရဲ့ထားပါ။
အကွိမျမြားစှာ themes များ
ဘဏ်လုပ်ငန်း * [အိန္ဒိယသာလျှင်]
စံချိန်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု ** [android9အပေါ်မထောက်ပံ့]
ထို့အပြင် app ကိုနေဆဲကြော်ငြာအားဖြင့်မောင်းနှင်နေသည်
app ကိုနှင့်ဝန်ဆောင်မှု၏အကြီးမားဆုံးကျဘက်ကို privacy ကို, လုံခြုံရေးနှင့်ကျူးကျော်များ၏မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ သင် installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖြတ်သန်းသွားသည့်အခါကအလုပ်လုပ်တယ်နှင့်မည်သို့လေ့လာသင်ယူတဲ့အခါမှာညာဘက်စတင်ချိန် မှစ. , အထူးသဖြင့်, စိုးရွံ့ခြင်းနှင့်အကြောင်း freaky တစ်ခုခုရှိသေး၏။
သငျသညျဖုန်းနံပါတ်ကနေခေါ်ဆိုမှုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဖုန်းကို lookup ပြုလုပ်နေ reverse ဆင်တူ
သင်ဖုန်းနံပါတ်ပေါ်လျှင်, သင်အမှန်တကယ်အတည်ပြုရန်နှင့် Truecaller app ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့တစ်မှန်ကန်သောအမည်အားပေးနိုင်ပါသည်။
ဤသည် creepy အသံလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်လူတစ်ဦးတိတ်ဆိတ်စွာအပေါ်သူတို့ရဲ့ဖုန်းကိုသိုထားပြီ, ဒါမှမဟုတ်သူတို့အမှန်တကယ်ဘယျအခြိနျမှာသူတို့ရဲ့စမတ်ဖုန်း check လုပ်ထားလျှင်သင်အမှန်တကယ်ရှာဖွေနိုင်သည်။
Truecaller သင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုရေးထားသမျှသောဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုရှာဖွေပေးနိုင်ပါတယ်။ သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးကသင့်ရဲ့ smartphone ကိုညွှန်သည်။